I-ANC kumele izivume izinkinga ezidalile – Bayede News
I-ANC kumele izivume izinkinga ezidalile
Ngasekupheleni konyaka owedlule, amalungu eSishayamthetho saKwaZulu- Natal, kanye nethimba elivela kuNational Council of Province (NCOP), avakashela abanye bomasipala besifundazwe ngenhloso yokuyohlola isimo sokusebenza kwabo, nokuzama ukuvundulula ezinye zezingqinamba ababhekene nazo kanye nokuthola amasu okubabuyisela emgqeni.
by nguZwakele Mncwango Posted on 14 February 2020 14 February 2020
Ngasekupheleni konyaka owedlule, amalungu eSishayamthetho saKwaZulu- Natal, kanye nethimba elivela kuNational Council of Province (NCOP), avakashela abanye bomasipala besifundazwe ngenhloso yokuyohlola isimo sokusebenza kwabo, nokuzama ukuvundulula ezinye zezingqinamba ababhekene nazo kanye nokuthola amasu okubabuyisela emgqeni. Omunye womasipala, owavakashelwa, uMasipala odunguzelayo iMooi-Mpofana. Lo Masipala iminyaka emibili yonke ilandelana uMcwaningimabhuku Jikelele, uKimi Makwetu, akakwazanga ukuphawula ngesimo sawo sezezimali ngenxa yokushoda kwemininingwane eyathunyelwa kuye kanti futhi lo Masipala ungaphansi kwesandla somlawuli wesifundazwe kusekela ngoZibandlela wezi-2017.
Okudabukisayo, iMooi-Mpofana akusiyo yodwa ebhekeni nale nkinga, inqwaba omasipala abawayo. Isizathu asikho nzima ukuthi sibonakale – ukuntuleka kwendlela esobala uma kuza endimeni eelinywa ikakhulukazi nguHulumeni kanye noHulumeni Bezindawo. Kumanje, KwaZulu-Natal bayisishagalolunye omasipala abangaphansi komlawuli, kuhlanganisa nalaba abalandelayo; Inhlokodolobha yesifundazwe, iPietermaritzburg, uMasipala uMsunduzi ungaphansi kwesandla sikamlawuli ngenxa yokuhluleka ukwenza amakhansela aphendule ngezinye zezinqumo azithathayo, ukungathathelwa izinyathelo kwalabo abathinteka enkohlakalweni, ukuhluleka ukuqapha iziphathimandla ukuthi zenza okuhambisana nomthetho yini.
UMasipala iNewcastle; izakhamizi zivuke umbhejazana zavala imigwaqo futhi zahlasela zaphinde zathungela izitolo elokishini Osizweni naseMadadeni ngenxa yokugqoza kwentuthuko. IMeya yala yaphetha ukuhlangana nazo. UMasipala Abaqulusi, khona ukulethwa kwezinsiza emphakathini sekufana nento engekho, izisebenzi zikaMasipala aziwenzi umsebenzi ngendlela, amathenda akhishwa ngendlela engesiyo, kuqashwa abantu kungalandelwanga imigudu eqondile. Isimo sibi ngendlela yokuthi uSomlomo walo Masipala waboshelwa icala lokweba isiphehlamandla sikaMasipala futhi esinye sezisebenzi siphenywa ngecala lokweba imali eyizigidi ezi-R4 kaMasipala. UMasipala iDumbe, lapho izakhamizi zigcwale izitaladi futhi zacekela nengqalasizinda kade zitelekela ukugqoza kwentuthuko okuhlanganisa nokushoda kwamanzi ahlanzekile. Lokhu, kwenzeka nje amakhansela asolwa ngomkhonyovu wokuqasha kanye nokunikezela ngamathuba amabhizinisi emindenini yawo kanye nakubangani.
Kukhona nabanye omasipala okubonwa ngokusa nakubo abafana noMkhandlu kaMasipala weSifunda Ugu, oxakene nenkinga yokuntuleka kwamanzi kodwa uNdunankulu uSihle Zikalala kanye Nongqongqoshe wakwaCogta, uSipho Hlomuka abayigqizi qakala indaba yakhona. IDA isikhale kaningana ithi lo Masipala awuchazwe njengendawo yenhlekelele futhi kungenelelwe ngaphansi kweSigatshana soMthethosisekelo 139 (1). Kuze kube inamuhla akukaze kubuye mpendulo. Isimo silokhu siqhubeke njalo siba bucayi. Yize ubufakazi obuqandula ikhanda buphambi kwabo, i-ANC iyaqhubeka nokudlala ipolitiki engathi akwenzekanga lutho, ayifuni ukusamukela isimo ngendlela esiyiso okwamanje futhi nokubheka ukuthi izinto zonakale kuphi. Kuyadumaza ukuthi iyona ndlela yokwenza izinto i-ANC eyiqokile kunokuba ivume amaphutha ayo futhi iqalise ukwenza uguquko.
Uma i-ANC isaqhubeka nokuqinisa ikhanda nokuzenza msulwa, umbuzo ovukayo nosalokhu umile uthi, likuphi ithemba uma abantu abasemandleni nokumele kube yibo okumele balethe uguquko, kodwa bengazimisele? Iliphi ithemba esinalo uma iHhovisi likaNdunankulu KwaZulu-Natal nokuyilo okumele libe yisibonelo kodwa alikwazi ukuthola umbiko ongenagcobho ngokombiko kaMcwaningimabhuku Jikelele futhi ezinye zezisebenzi ziyaphenywa ngamacala enkohlakalo? Likuphi ithemba uma i-ANC ingakwazi noma ingaboni ukuthi uhlelo lokuhlohla amaqabane ezikhundleni komasipala lwenzani uma kuqokwa abaphathi abaphezulu abangenawo amakhono kanye namava adingekayo? Likuphi ithemba uma izisebenzi ezisolwa ngenkohlakalo uma sezibona ukuthi inhlanzi ishelwe ngamanzi zishushumbiswa zivumbuke kweminye iminyango na?
Yiliphi ithemba esinalo uma umbiko kaMcwaningimabhuku Jikelele uma echaza ngesimo somasipala baseKZN ekhala ngokuthi baphinda phinda into eyodwa unyaka nonyaka kube ngakolunye uhlangothi i-ANC ivikela amaqabane na? Abantu bezwe lethu kanye nesifundazwe sethu bafanelwe okungcono. Abantu bamelwe ukuthola lokho ababethenjiswe khona ngenkathi kuza ukhetho lwedemokhrasi ngowe-1994. Abantu bafanelwe ukuhlala endaweni enamathuba. Abantu abafanelwe ukuhlala ezweni noma esifundazweni esibhekene nezinkinga kanye nezingqinamba ezidalwe yilo Hulumeni we-ANC. Abantu abafanelwe ukuhlala ezweni lapho khona kumele bazane nabathize ukuze baphumelele futhi abafanelwe nakancane ukuphila ngaphansi kwesimo lapho ukuphepha kwabo kusengcupheni imihla namalanga.
Uguquko lolu abantu bakithi abakhala ngalo nolukade baludinga kumele luqale emazingeni aphansi komasipala nokuyizikhungo ezithintene kakhulu nezimpilo zabo usuku nosuku. Kumele kuqale ngokuthi omasipala bazi ukuthi bamelwe ukuletha izidingo zentuthuko kubantu nokusebenza ngendlela esezingeni futhi baholwe ngabantu abazinikele futhi abakulungele ukwenza uguquko. Lolu guquko kumele luqale nge-ANC, iyeke ukuvikela izisebenzi zakomasipala ezingenzi kahle kanye namakhansela. Uma isifundazwe sethu singaqalisa ukuxazulula lezi zingqinamba esibhekene nazo futhi siqale sibuke lokhu esinakho nesingakwenza, kumele i-ANC iqale ngokuzehlisa ilivume iphutha layo ukuthi eziningi izinkinga zidalwe iyo nokuthi iyingxenye enkulu yenkinga khona sizokwazi ukuqhubekela phambili nezixazululo ezizoletha uzinzo ezweni kanye nasesifundazweni.
Posted in Umbono